प्रहरीबाट आर्मी हुँदै जनमुक्ति सेनाको कमान्डर बनेका लडाकुको जेलयात्रा
नारायण अधिकारी बुधबार, चैत २६, २०७६, १४:५६
काठमाडौं- रातको साँढे ३ बजे ढोका ढक्ढक्याउँदै आदेशात्मक शैलीमा स्वर सुनियो, ‘ढोका खोल्नुस्।’ को हो? किन? के भयो? जस्ता प्रश्न मनमै खुम्च्याउँदै वृद्ध तुलाराम भगत ढोका खोल्छन्। चारपाँच जनाको समूहमा आएका व्यक्तिले तुलारामका सुतिरहेका ३८ वर्षीय जवान छोरो झलकुमार (झलक)को हातमा हत्कडी लगाउँछन्।
‘किन? के गरेँ मैलै?’ झलक प्रश्न गर्छन्।
‘सबैकुरा चौकी गएपछि थाहा हुन्छ,’ जवाफ फर्काउँदै घरमै सुतिरहेका झलकलाई ओछ्यानबाटै उठाएर प्रहरी बाहिरियो। यो २०७४ मंसिर ८ गते विराटनगर महानगरपालिका-१ स्थित झलकको आफ्नै घरमा भएको घटना हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुर्‍याएपछि झलकलाई पक्राउको कारणबारे जानकारी दिइन्छ। नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेकपामा लागेको र चुनाव बिथोल्न सक्रिय देखिएकाले सुरक्षा थ्रेटका कारण पक्राउ गरिएको मोरङका तत्कालीन एसपी मनोजकुमार केसीले बताउँछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सार्वजनिक अपराधको कसुरमा म्याद लिएर प्रहरीले झलकमाथि अनुसन्धान थाल्यो। मंसिर १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले झलकलाई साधारण तारेखकमा छाड्न आदेश दियो।
ओछ्यानबाटै पक्राउ परेका झलक प्रहरीको हिरासतबाट त छुट्छन्। तर साढे २ वर्षसम्म पनि उनी घर फर्कन पाएका छैनन् । अझ दुखको कुरो त्यसयता उनी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन्।
ओछ्यानबाटै पक्राउ परेर सार्वजनिक अपराधको कसुरबाट समेत रिहा भएका झलकले कसरी पाए जन्मकैद? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न दुई दशकअघि फर्कनुपर्ने हुन्छ।
झलक गरिब थारु परिवारमा जन्मिएका थिए। दैनिक काम नगरी परिवारको मुखमा माड लाग्दैनथ्यो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको द्वन्द्वले उग्र रूप लिइरहकै बेला उनी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)मा सिपाहीका रुपमा भर्ती भए। त्यसपछि २०६१ सालसम्म उनले सशस्त्र प्रहरीको सुनसरीस्थित पकली ब्यारेकमै रहेर काम गरे।
२०६१ सालमा घरबिदा भनेर ब्यारेकबाट बाहिरिएका झकल पकली ब्यारेक फर्किएनन्।
‘सशस्त्रबाट घर चलाउन गाह्रो। सेनामा भर्ना भए मिसनमा समेत जान पाइने भएकाले सेनामा भर्ना भएँ,’ समरी जनरल सैनिक अदालतमा दिएको बयानमा उनले भनेका छन्।
घरबिदा भनेर गएका भलक २०६१ असार १ गते धरानस्थित सेनाको फुस्रे क्याम्पबाट सिपाहीमा भर्ना भए। नेपाली सेनाको विष्णुदल गुल्म (हाल गण)मा एक वर्ष बिताए। सेनाको गणमा पनि उनको मन अडिइरहेको भने थिएन।
'कसले भन्छ क्रान्ति यहाँ सफल हुँदैन..। एक दुई हार हुन सक्छ। तर मुटु इस्पात बन्छ' जस्ता गीतले मोआवादीबाट घोषित जनपक्षीय एजेन्डाबाट र यस्ता क्रान्तिकारी गीतले मलाई सेनाबाट विद्रोह गरेर देश र जनताको मुक्तिको लागि माओवादी आन्दोलनमा जान प्रेरित गर्‍यो। मैले विद्रोह गरेँ। सेनाको सिपाहीबाट जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेँ,’ झलकले भनेका छन्।
झलक सशस्त्र प्रहरीबाट तत्कालीन शाही सेना हुँदै जनमुक्ति सेना बनिसकेका थिए। अब उनमा जागिरे मानसिकता हरायो। मात्रै देश र जनताको मुक्तिका लागि जनमुक्ति सेनामा गएको उनले बयानमा भनेका छन्।
उनी रित्तै जनमुक्ति सेनामा गएका थिएनन्। आफूसँग भएको हतियारले मात्रै नपुगेर उनले साथीको हतियारसमेत लिएर सेनाको ब्यारेकबाट बाहिरिएका थिए।
आफ्नो साथमा रहेको इन्सास राइफल १ थान, यसका म्याग्जिन ४ थान, ५ सय राउन्ड गोली, सिपाही भीमबहादुर खड्काको नाममा दर्ता भएको गलिल राइफल १ थान, यसको म्याग्जिन ४ थान, ३ सय राउन्ड गोली र २ वटा ग्रिनेट लिएर उनी ब्यारेकबाट २०६२ साउन ८ गते राति साढे १० बजे बाहिरिएका थिए।समरी जनरल सैनिक अदालतका अध्यक्ष सहायक रथी काजीबहादुर खत्री, सदस्यहरू प्रमुख सेनानी मनोज थापा, सेनानी श्यामशरण गोतामे र प्राड विवाक प्राड राजकुमार रञ्जितको इजलासले २०७४ पुस १३ गते झलकलाई सोध्यो- यत्रो हतियार लिएर तपाईं कसरी ब्यारेकबाट भाग्नु भयो?’
‘म हातहतियार लिएर लाइनबाट करिब २ सयदेखि २ सय ५० मिटरमा रहेको ट्वाइलेट नजिकै रहेको तारबार नाघी सेनाको चुस्तामै भागेको हुँ,’ हतियार लिएर उम्किएको दिन सम्झदै उनले बयान दिएका थिए।
अत्याधुनिक हतियार लिएर नेपाली सेनाको बर्दीमै ब्यारेकबाट भागेका झलक त्यसपछि भोजपुरको श्यामलीला स्कूल नजिकैको डाँडाको एक अपरिचित व्यक्तिको घरमा बास बसे। भागेको रात र अर्को दिन उनी त्यही घरमा बसे। बेलुका उक्त घरबाट निस्केर सुन्तले जाने बाटोको डाँडाछेउको एक अपरिचित मान्छेको घरमा बास बसे।
त्यहाँ खाना खाए। त्यसपछि घरधनीसँग कपडा मागेर लगाए। बर्दी फुकालेर झोलामा हाले। त्यहाँबाट केही अगाडि गएपछि झलकको भेट दुई जना माओवादी कार्यकर्तासँग भयो।
‘सेनाबाट विद्रोह गरेर हतियारसहित आएको हुँ भनेर सबै कुरा सुनाएँ। उनीहरूले विश्वास गरे। त्यसपछि हामी फर्किएर पुनः कपडा फेरेको घरमा गएर हतियार लिएर निस्क्यौं,’ बयानमा झलकले भनेका छन्, ‘उनै दुई कार्यकर्ताले भोजपुरको च्याङ्ग्रे बजार लगेर एरिया कमान्डर शैलेन्द्र भुजेलसँग भेट गराए।’
झलकले लगेको उक्त हतियार शैलेन्द्रसँगै दोस्रो डिभिजनअन्तर्गत १६ बटालियन कमिसार दीपेश राईलाई बुझाए। अब भने उनी ढुक्कले सास फेर्ने भइसकेका थिए। सेनाबाट सुरक्षित भइसकेको महसुस गरेका थिए।
केही दिनपछि सिग्नलमार्फत् खबर आएपछि झलक र शैलेन्द्र १६औं बटालिन भोजपुर गएका थिए। घोरेटार माविमा झलकको स्वागतमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बटालियन कमान्डर तथा राजनीतिक कमिसार दीपेश राई जिल्ला सक्रेटरी सिर्जना ढकाल, जिल्ला इन्चार्ज सावित्री काफ्ले (समर)सहितको उपस्थितिमा हतियार बुझाउने कार्यक्रम भयो।
त्यसपछि उनी एरिया कमान्डर शैलेन्द्र भुजेलसँगै च्याङ्ग्रे बजारतर्फ फर्किए। केही दिनपछि झलक शैलेन्द्रसँगै डिभिजन कार्यालय सकलपुर, मोरङ गए। सकलपुरका डिभिजन कमान्डर राजेश, सहायक कमान्डर प्रमोद र कमिसार सन्तोषसँग भेट भयो। केही दिन सकलपुरमै उनले बिताए।
दोस्रो डिभिजन अन्तर्गत दुई वटा कार्यालय, एक विशालकुमार स्मृति ब्रिगेड अर्को रामवृक्ष ब्रिगेड थिए। रामवृक्षको प्लाटुन कमान्डरको जिम्मेवारी दिई झलकलाई पठाइयो। सशस्त्र र आर्मीका सिपाही झलक अब जनमुक्ति सेनाको कमान्डर बनिसकेका थिए।
रामवृक्षका ब्रिगेड कमान्डर नरेश, कमिसार विकास राई र सहायक कमिसार आरसी शर्मा (विज्ञान) थिए।
पहिलाको दुश्मन जनमुक्ति सेना अब उनको आफ्नो बनेको थियो। नेपाली सेना भने दुश्मन। अब उनी सेनाविरुद्धै लड्नुपर्ने बेला आइसकेको थियो।
तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य (पिबिएम) हरिबोल गजुरेलको कमान्डमा आक्रमणको योजना बन्यो। झलकलाई हेडक्वार्टरमा राखेर डिभिजनस्तरीय घोरेटार मोर्चाले यसको आयोजना गरेको थियो। यही मोर्चामा थिए भलक। यो आक्रमणमा माओवादीले ठूलो क्षति व्यहर्नु परेको थियो। त्यसपछि सबै आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र फर्किए।
त्यसको केही समयपछि फेरि हरिबोलकै कमान्डरमा मलंगवा मोर्चाका योजना बनाई आक्रमणको तयारी गरियो। यसमा पनि जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट झलक नै खटिएका थिए। यो आक्रमणमा माओवादीतर्फका ६६ जनाको ज्यान गएको थियो। माओवादीले त्यसबेला सिडिओ समेतलाई आफ्नो कब्जामा राखेर केही दिनपछि छाडेका थिए।
जनमुक्ति सेना क्यान्टोन्मेन्टमा राखी समायोजनाको कुरा उठ्यो। त्यसपछि उनी माओवादीकै युवा दस्ता वाइसिएलमा गए। प्रचण्डको सुरक्षा खटिँदा भलकले सेनाबाटै लिएर भागेको अत्याधुनिक हतियार बोकेर उभिएको सेनाको सुराकीले दाबी गरेको छ।
यतिन्जेल राजनीतिले धरै कोल्टे फेरिसकेको थियो। सात राजनैतिक दलसहित माओवादीले राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने सहमति भइसकेको थियो। उक्त सहमतिसँगै युद्ध रोकिएपछि झलक आफ्नै गृहजिल्ला मोरङलाई कार्यक्षेत्र बनाएर पहिलो डिभिजनमा खटिए।
पछि जनमुक्ति सेना क्यान्टोन्मेन्टमा राखी समायोजनाको कुरा उठ्यो। त्यसपछि उनी माओवादीकै युवा दस्ता वाइसिएलमा गए। २०६३ मंसिर १९ देखि तीन दिनसम्म काठमाडौंको बालाजुमा वाइसिएलको राष्ट्रिय भेला चल्यो। भेलामा प्रचण्डको सुरक्षा खटिँदा भलकले सेनाबाटै लिएर भागेको अत्याधुनिक हतियार बोकेर उभिएको सेनाको सुराकीले दाबी गरेको छ।
यसलाई झलकसमेत नकार्दैनन्। पछि यही कुरा प्रचण्डले लेखेको पार्टीको दस्तावेजमा समेत छापिएको भन्दै हरिबोलले समेत उक्त दस्तावेज देखाएको झलकले बताएका छन्।
यसरी सशस्त्र प्रहरीबाट आर्मी हुँदै जनमुक्ति सेना, वाइसिएल र पछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पार्टीमा आबद्ध भएका झलक अहिले मध्यक्षेत्रीय कारागार कार्यालय सिमलटारी, भीमफेदीको (क) ब्लकमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्।
जसको हतियारबाट प्रचण्डलाई सुरक्षा दिइयो। जसले आह्वान गरेको युद्धमा होमिइयो। उनी अहिले गृहमन्त्री छन्। जसलाई ढाल बनाएर माओवादीले युद्ध लड्यो, जसको काँधमा राखेर माओवादीले बन्दुक पड्कायो, जसका जनमुक्ति सेनाको कमान्डर अहिले उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेको छन्। जनमुक्ति सेनाका पावेल (वासुदेव घिमिरे) समायोजनबाट अहिले नेपाल आर्मीको लफ्टिनेन्ट कर्णेल छन्। उनीसँगै मोर्चामा लडेका झलकलाई सेनाले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।
२०७४ मंसिर १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साधारण तारेखमा झलकलाई छाड्ने आदेश दिए पनि प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गरिसकेको थियो। कारण थियो, सेनाको इटहरी ब्यारेकमा बुझाउन लेखिएको पत्र।
नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी ब्यारेक सुनसरीबाट पत्र संख्या १४६२८ नम्बरमार्फत् झलक हतियारसहित भागेका भगौडा आर्मी भएकाले उनलाई बुझाउन भन्दै सेनाले मोरङ प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो। त्यसपछि उनी प्रशासन परिसरबाटै पक्राउ गरेर प्रहरीले सेनालाई बुझाएको थियो।
‘पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरमा मलाई केही समय सोधपुछ गरेपछि डोरीले हातखुट्टा बाँधियो। कालो कपडा लगाएर आँखा बन्द गराइयो। अमानवीय र क्रुर व्यवहार गर्दै, कुट्दै हेलिकोप्टरमा राखेर सैनिक प्रहरी गण, जंगी अड्डा भद्रकालीमा गैरकानूनी थुनामा राखियो,’ झलकको तर्फबाट दाजु नन्दुलाले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। दाजूले दायर गरेको उक्त रिट २०७४ चैत ४ गते खारेज भयो।
आफ्नो साथमा रहेको हतियार लिएर भागेको, उक्त हतियार शत्रुलाई बुझाएको, ती हतियार युएनद्धारा प्रमाणीकरण गरी सेनाको टु. मु. तोपखाना डिपोमा राखिएकाले शत्रुलाई हतियार बुझाएको भन्ने पुष्टि भएको, सशस्त्र प्रहरीको विभागीय स्वीकृति बिनै बदनियतले सेनामा भर्ना भएकोलगायत तथ्य देखाउँदै समरी जनरल सैनिक अदालतले २०७४ पुस १७ गते झलकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो।
त्यसपछि उनलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा राखियो। त्यहाँबाट सरुवा गर्दै हाल झलकलाई भीमफेदी कारागारमा छन्। समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलाविरुद्ध झलकले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गरे। सैनिक विशेष अदालतले पनि समरी जनरल सैनिक अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो।
सैनिक अदालतको यस्तो फैसलापछि उनले सेना, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दोस्रो पटक सर्वोच्चमा रिद दायर गर्दै सैनिक अदालतकको फैसलालाई उल्ट्याए कैदमुक्त हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
उनले जनयुद्ध लडेको पार्टी तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। यसका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै छन्। पार्टी एकभएपछि जनयुद्धको हिस्सा ओलीमा पनि जान्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने झलकलाई सैनिक अदालतले सुनाएको फैसला नै सदर छ र झलकले हालेको रिट खारेज गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन्।
शान्ति सम्झौता विपरीत जन्मकैदको सजाय भोगेका झलककी श्रीमती वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा छिन्। दुई छोरामध्ये ११ वर्षको जेठो छोरा ब्लड क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेका छन्।
‘त्यसबेला मैले मृत्युलाई ठूलो देखिनँ। बरु देश र जनताको पक्षमा राजनैतिक परिर्वतनको लागि नेकपा माओवादीका नेतासमक्ष विद्रोह गरेर आउँछु भन्ने वचन पूरा गर्ने कार्यलाई महान काम ठानेँ। पूरा पनि गरेँ। एकातिर आज मेरो घर परिवार घरव्यवहार विगत भन्दा पनि अस्तव्यस्त छ। अर्कोतर्फ म निवेदक जन्मकैद भोग्दै छु,’ सैनिक अदालतले सुनाएको सर्वस्वसहितको जन्मकैदको फैसलाविरुद्ध झलकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा उल्लेख छ।
फोक्सुन्डो यात्रा ब्लुज : मन हर्ने सौन्दर्य, मुटु दुखाउने जिन्दगी यस्तो लाग्छ, देश भनेको त फगत काठमाडौँ रहेछ! जहाँ चिल्लो बनाइएका दुई चारवटा सडकका तस्विर देखाएर देश विकास हुँदैछ भनेर प्रचार गरिन्छ।... आइतबार, कात्तिक ९, २०७७